LOZAM-PIARAKODIA :: Mompera maty tsy tra-drano teny amin'ny lalam-pirenena fahafito • AoRaha
LOZAM-PIARAKODIA Mompera maty tsy tra-drano teny amin’ny lalam-pirenena fahafito
Tra-doza ny fiara marika “Peugeot 106 » noentin ‘ny mompera Rakotonirina Théophile, tany Ilaka-Centre, afak’omaly, tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany. Namoy ny ainy teo no ho eo io relijiozy io. Tapatapaka ny hazondamosiny sy ny tongony. Lasa tany anaty hantsana ilay fiara noentiny ka tao anaty rano vao tafajanona. Ahiana ho vokatry ny torimaso fotsy no nahatonga ny loza, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
“Avy any Fianarantsoa nikasa hihazo an’ Antananarivo ny fiara noentin’io mompera io. Toerana iray somary fiakarana no nitrangan’ny loza. Tsy nandeha mafy izy fa ahiana ho natory ka niala ny lalana ny fiara nentiny. Araka ny fitantaran’ ireo mpino katôlika eto aminay dia fanaon’io mompera io ny maka aina mijanona eto Ilaka rehefa mandalo eto izy eo anelanelan’ny amin’ny 12 ora antoandro sy amin’ny 2 ora. Voalaza ihany koa fa mihinana fanafody izy ka mila maka aina amin’io fotoana io na dia tsy fanafody mampatory aza no ateliny”, hoy ny fitantaran’ireo mpitandro filaminana manao ny famotorana momba ity tranga ity.
Tsy nisy olona hafa tao anatin’ny fiara noentin’ity mompera niharan-doza ity, araka ny loharanom-baovao hatrany. 64 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana tampoka izao. Be
mpahafantatra any Ambositra sy Fianarantsoa ny tenany satria efa nitondra fiangonana tany Fandriana, Ambositra ary nampianatra tao amin’ny seminera Ambozontany. Tompon’andraikitry ny toeram-pitsaboana iray any Fianarantsoa izy, nialoha izao nahafaty azy izao.
Raharaha fitsaram- bahoaka
Zava-mahadomelina Paraky gasy fitonjato kilao sarona teny Antohomadinika
Hosoka Olona telo naiditra am-ponja fa voarohirohy amin’ny vola sandoka
FANAOVANA HOSOKA :: Sarona ny vola sandoka maherin’ny iray tapitrisa ariary
VONO OLONA :: Voasambotra ny sakaizan’ilay Frantsay maty sy olona telo hafa